Njalo ube ezinzwaneni zakho - akulona yini ukuzama lokhu? Futhi yini ezosiza ukuvuselela isikhumba sethu? Yebo, tonic! Kodwa uma umsebenzi wokuhlanza ubisi kufihliwe egameni lomkhiqizo wezithokozi, izakhiwo eziyisimangaliso ze-tonic aziwa wonke umuntu. Ingabe uthengisa ngokuthi "wonke umuntu ugijima - futhi sisebenza" okungajabulisi kakhulu. Okokuqala, umcabango uzalwa ekhanda lami: kunjani kimi, intombazane enhle kangaka, futhi akukho uTamagotchi engalindeleki, lapho enayo wonke umuntu? Yini ngaye, noma kunjalo, okwenza kanjalo, akucaci ngokuphelele. Imizwa efanayo iqhutshwa abaningi ngokuphathelene ne-tonic. Kungani kudingekile, uma sigeza ukwakheka nge-sese namanzi, futhi siphuthukisa isikhumba ngekhilimu? Ingabe isikhumba sethu sidinga i-toniki noma ingenye into eyenziwa ngamafemu ezithokozi azama ukusikhandla ukuze athenge enye engenamsebenzi?
Leli gama elithi "tonic" lisinika inkomba: ukukhathazeka kwayo kokuqala nokuyinhloko kukhonsa. "Amanzi aphilayo", ahlaselwa ama-flacon, avuselele futhi avuselele isikhumba, akhuthaze izinqubo zokuhambisa umzimba kanye nokusakaza. Kufana nokuzivocavoca ekuseni: kuthatha imizuzu emihlanu nje kuphela, kodwa ngokushesha ususa iphupho futhi usitshele nge vivacity. Ungakhohlwa mayelana ne-tonic kusihlwa. Insipho, ubisi noma i-gel remover remover isusa ukungcola nothuli "edolobheni elikhulu", ama-make-up namafutha okweqile okwakhiwa phakathi nosuku. Kodwa akusikho konke. I-tonic eyishintshayo iyakuthanda ukukhanya kokugcina: isusa amangqamuzana afile, ama-make-up ne-purifier ngokwabo (bona, cabanga, futhi uhlale esikhumbeni, ukuvimbela ukuthi ungabuyiselwa ubusuku). I-Tonic nayo inhle ngoba idonsa ukungcola kusuka ekujuleni kwama-pores, futhi ubisi nesepha kuyisusa kuphela ebusweni besikhumba. Zizwa umehluko! Uma uke uthathe kahle i-tonic eluhlobo lesikhumba sakho, khona-ke uzobhekana nalo kanye nezinye izinkinga ezithile:
■ isikhumba esinamafutha nesikhanya. U-Alcohols, okuyingxenye ye-tonic, ye-degrease "sebum". Ukuhlanganisa izithasiselo ezifanayo kuqeda i-gloss.
■ Isikhumba esinenkinga esibhekene namazinyo. Utshwala luhlakaza izigxobo ezigulini ezinobuthi futhi buvimbela isikhumba. Ukunciphisa ama-pores ebuso ubuso bukaNormaderm kusuka kuVichy buzoyeka izinqubo zokuvuvukala futhi kuvimbele ukubukeka kwe-acne. Kodwa khumbula: ngokucindezela kwe-acne, kunengqondo ukushintsha ithoni ye-lotion ekhethekile yesikhumba senkinga.
■ isikhumba esomile. Izithako ezithuthukisa (ngokuvamile i-aloe vera) zibuyisela izinga lokulinganisela kwamanzi.
Njengomthetho, utshwala yisisekelo se-tonics. Ku-tonics yekhanda elixubekile nelinamafutha noma ngomphumela wokuqinisa i-pore okusheshayo, ukuhlushwa kwe-alcohol kungafinyelela cishe ngamaphesenti angu-50.
Ngesikhumba esomile, i-tonic ngaphandle kokuphuza noma ngokuqukethwe okuphansi kungcono kakhulu. Kungcono ukuwasebenzisa ngokuthambekela kocansi nokucasula. I-tonic yokuhlanza epholile, engenakulungiswa emzini, i-Pur-Protect esuka ku-Ozon ', ayinalo utshwala. Ivikela amangqamuzana ekhanda emonakalweni ebangelwa i-metal ion esindayo, intuthu kagwayi kanye ne-chlorine.
Isigaba esilandelayo ama-agent wokuqhafaza. Into eyodwa engalungile: umphumela wokulwa nombala we-tonic awuhlali isikhathi eside. Ukuze ubuyekeze umphumela, kuzomele usebenzise kukho emahoreni ambalwa. Ukuze ungathwali ibhodlela le-tonic nawe, lungisa umphumela kusukela ekuseni: sebenzisa ukhilimu wokuqhathanisa ngokushesha ngemva kokuba ithoni isetshenziswe.
Ingxenye yesithathu, ingxenye yokuzikhethela ye-tonics yizinto ezondla isikhumba. I-Tonic ne-extracts yamakhambi okwelapha kanye namafutha abalulekile ayenakekela ukunakekela isikhumba esikhathele. Ngokuqondene nezinhlobonhlobo ze-tonic, ukunakekelwa kufanele kuhokhwe kuma-hypoallergenic kanye nezinyathelo ezihlangene. Owokuqala uzosiza labo abanesikhumba esibucayi, kanye nalabo abajwayele ukubhekana nokugula.
Kusho "2 ku-1" (kuhlangene) ngesikhathi esifanayo kufaka ubisi lwe-tonic nokuhlanza. Kulula ukuyisebenzisa, kodwa ungalindeli ukuthi ukuhlanganiswa kwezithako kuzokwandisa umphumela wabo. Zisebenzise ku-dacha, uzochitha ubusuku emcimbini - lapho kungekho khona indlela yokuthatha ibhethri lonke lamathebhu. Azikho izimfihlo zokusetshenziswa kwe-tonic. Kwanele ukuthatha ipotton pad, ukuyihambisa nge-toner bese usula ubuso izikhathi ezingu-2-3. Sula emigqeni yokusikhipha (imizila engaphansi kokucindezeleka kwesikhumba). Ukunyakaza okuyi-circular kusuka phakathi kwamahlathi kuya ezindlebeni, kusukela phakathi kwebunzi kuya emathempelini, kusukela phakathi kwe-chinki kuze ku-kush, kusukela emaceleni angaphakathi kwamehlo kuya kwejwabu leso elingaphandle futhi kusukela emagumbini angaphandle kuya ezingaphakathi ngaphakathi. Uma uthole i-tonic yakho, uzokhohlwa ngomzwelo ongajabulisayo wokuqina. Isikhumba sobuso sizophefumula, sizogcwala ukuhlanzeka nokuqina. Ngelinye igama, kuzoba kuhle!
Uyomangala, kepha i-tonic ingasetshenziswa ngisho namanzi ajwayelekile. Kulula ukuhamba ngebhizinisi noma izivakashi, lapho kungcono ukungathembeli amanzi amathonti angaboni kahle. Futhi kusesimo sezulu esishisayo kungcono ukumanzisa njalo ubuso bakho ngezicubu ezihambisana ne-tonic. Emva kwakho konke, ukuthuthumela kuyinto usawoti, futhi kuphazamisa isikhumba.
Kulungile kanjani ukubheka isikhumba senkinga?
Amaski ebuso okudla okunomsoco
Ama-creams okuguga: kungani kufanele uqale ukuyisebenzisa futhi nini
Strawberry and Strawberry Juice e-Cosmetology
Ukunakekela ubuso ekhaya ngemva kweminyaka engama-40
Ukubukeka kwesifazane emva kokubeletha
Ukuzila okumile: izinzuzo
I-coconut-chocolate rolls ngaphandle kokubhaka
Ukudla kweFrance ukukhulelwa kwentombazane
Ukuzivocavoca umzimba kokuthola emva kokubeletha
Izinto zezingane uma usuka esibhedlela
Ukuhlakulela umcibisholo womuntu ohloniphekile ekhaya
Indlela futhi kuphi ongayithola khona ingane
Indlela yokuthola isiphetho ngosuku lokuzalwa
Usuku lokuqala: amathiphu amantombazane
I-Apple nge-honey, amantongomane kanye nembewu ye-poppy
Isobho nge-isitshalo seqanda kanye nopelepele obomvu